@christianityislife - channel telegram audience statistics Christianity is Life......
Christianity is Life......
Christianity is Life is an Exclusive Global Channel for Powerful , Inspiring, Motivational Messages for Mindset for Excellence God loves dreamers!!!
1 818 401place
Christianity is Life...... 15 Apr, 03:46
Nothing in life is permanent… Be humble
Christianity is Life...... 30 Mar, 11:54
Misker Solomon on LinkedIn: “If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't
“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.” ― Martin Luther...
Christianity is Life...... 07 Mar, 21:33
🎁Safaricom ethiopia ሽልማት🎁 በተጠቃሚዎች ዘንድ እውቅናን ለማትረፍና ደንበኞችን ለማብዛት የቴሌግራም bot ከፍተናል በውስጡም ብዙ ሽልማቶችን አዘጋጅተናል። 🎁**ለእርስዎ እና ለ2 ጓደኛዎ የ 3000 ብር ስጦታ** 🎁smart phone( s21 ultra) 🎁Asus personal computer ይህንን ለጓደኞችዎ በመላክ ተሸላሚ ይሁኑ ማሳሰቢያ! ይህ ሊንክ የሚያገለግለው ለ Abraham ብቻ ነው https://t.me/Safaricom_ethiopia_new_bot?start=r0008586243
Christianity is Life...... 27 Jan, 13:13
Iccittii Milkaa’inaa Addunyaa kanarratti namootni jireenya isaanii keessatti milka’aan jedhaman amaloota wal isaan fakkeessu hedduudha qabu. Amalootni isaan wal fakkeessu kunneen iccitii milka’inaa akka ta’anis irratti walii galama. 1.#Namootni milka’an ofitti amanu Jireenya keessan keessati waan abjootan milkeessuu yoo barbaadan; abjuu keessan galmaan gahuu akka dandeessan onnee keessaniin amanuudha qabdu. Ofitti amanuun kan wajjiin dhalanne osoo hin taane filannoo keenyaan kan dhufuudha. Namootni milkaawan jedhaman iccitii milkaa’ina isaanii yoogguu dubbatan yoo dhageessan ta’e milkaa’ina isaaniif sababni guddaan “wanti hunduu ni danda’ama !” Jedhaanii waan amananiif malee kennaa addaa wajjiin waan dhalataniif akka hin taane himu. Jabaadhee waanan dubbiseef, hojjadheef….bakkan hara’a jiru gahe siin jedhu. Atis bakka yaadde gahuu akka dandeessu laphee keen amani. #2.#Namootni milka’aan kaayyoo qabu. Hundi keenya uumamaan Sammuu waa kaayyeessuu danda’u qabannee dhalanna. Yoo sammuu keetti waa kaayyeffatte bakka yaade gahuuf halkaniif guyyaa carraqxa. Kaayyoon sammuu kee kessatti jiru humna siif ta’a; bu’aa ba’ii jireenya keessatti gufuun yoo si muuddata akka laayyooti akka hin kufne ; yoo kuftes kuftee akka hin hafne; miixxattee akka kaatu;akka abdii hin kutanne humna sitti hora. #3. #Namootni milkaa’an tarkaanfi tokko ful-duratti tarkaanfatu Namootni milka’an kan namootni eeganin alatti dhimma boba’an irratti cimsanii hojjatu. Barataa yoo ta’e haala gaariin qo’achuu; daldalaa yoo ta’e ammoo maamiltoota Isaa haala akamiin qabuun akka irra jiraatu ni beeku. #4. #Namootni milka’an tarkaanfii fudhatu. Namootni milka’an iccitii tokko beeku ” Addunyaa kanarratti tattaafii malee bu’aan argamu akka hin jire; No gain without pain” jedhaniti amanu. Kanaaf bakka yaadan gahuuf sadarkaa garagaraatti murtii dabarsu/tarkaanfii fudhatu. Bakka yaadde gahuu yoo barbaadde afaaniin qofa haasa’uu hin qabdu;bakka yaadde kan si qaqqabsiisu tarkaanfii tokko tokko fudhachuudha qabda. Fkn barataa ciimaa ta’uu akka barbaadu odeessuu osoo hin taane hojiitti seenuu qabda…cimsitee qo’achuu !! #5. #Namootni milka’an kanneen biroo jajjabeessuu jaalatu! Milka’ina jireenyaa yoo barbaadde iddoo oolmaa keeti namoota jiraan kan sii oliis haa ta’an kan sii gadii waan gaarii isaan hojjataan hangamiyyuu xiqqa haa ta’u dinqisiifadhuuf ykn jajjabeessi. Namni dinqisiifatamuu jibbu hin jiru.Kana gochuu keetiif ammoo wanti kaasartu tokkoyyu hin jiru; bu’a garuu ni argata: isaan jajjabeessuu keef sitti gammadu ;ofii kees ni gammada. Nama wajjiin wal-qunnamtii gaarii horatta.Namoota wajjiin walqunnamtii gaarii yoo qabaate jaalalaa fi kabajaa argata.kun ammoo karaa biraan ofitti amantaa kee siif dabala. Kanarra darbee ammoo namootni waliin hojjatu kunneen kayyoo kee hubbachuun galma akka geessuu si cinaa dhaabbatu/si tumsu/
Christianity is Life...... 21 Jan, 13:15
Atoo utuu mana hidhaa hin seenin dura waa’ee eenyummaakeef dubbattee hin beektu, Waan Oromoo ibsu homaa utuu hin hojjetin Oneg jedhanii akkamitti si hidhan jedheen gaaffiikoo dhiyeesseef Sagalee isaa ciratee. Yeroo sana akka habshoota naannookoo jiraachaa turaniitti, mootummaan wayyaanee uummata Oromoofi Amaaraa wal jibbisiisuuf hojii siyyaasaa hojechaa jira jedhamee dubbatama. Isuman bakkee irraan dhaga’u kanan walgahii waamamne irratti dubbadhe. Kanaaftu maqaa ooneg jedhu natti maxxansanii mana hidhaa na galchan. Kun kan ta’e waggaa 26 duradha. Yeroo sanatti shaabiyaafi Wayyaaneen wal hin lolle turan……. Ati inni barreeffama kana dubbisaa jirtu mata dureen barreeffama kanaa “OfEeggannoo godhaa” kan jedhu akka hin taane naaf hubadhu… Namootni keenya baayyeen barreeffama dheeraa dubbisuu waan hin jaallannef itti yaadamee mata duree ofumaan kennameedha… Ati garuu dubbistee xumurteetta….Kiyyata tokkotu si hafa… akkuma dubbistee xumurteen Lakkoofsa 22 barreessii sana booda yaadakee saanduqa yaadaa keessa kaa’i…Galatoomi! Karaawwan gurguddaan kallattiin bakka guhumsa kiyyaan na gaahan cuccufaa waan taa’aniif karaawwan keessoo keessoodhaan takka fuulduratti takka immoo duratti deemaa imala keenya itti fufnee jirra……
Ani kanin dhaladhee guddadhe magaalaadhuma Finfinneetttti. Afaan Oromoo baruu kiyyaaf sababni guddaan mana hidhaa galuu kiyya naan jedhe. Akkamitti… anatu gaafate… ? Afaan kiyya qofas otuu Hin taane Eenyummaa kiyyan bare… Ani eenyu? Kan eenyuu akkan ta’en of bare naan jedhe… Ajaa’ibsiifachaa… Utuu hin hidhamin dura; akka Oromoo taate hin beektumooo….. ? Beekas hin beekus hin jedhamu. Abbaanifi haati kiyya Oromoo ta’uu isaanii nan beeka. Garuu arrabsoo; jibbiinsa waa’ee Oromootiif dubbatamu yoon deggere malee mormee hin beeku… #Gaalla jedhanii gaafa Ijoollee oromoo arrabsan homaa tokkoyyuu anatti hin fakkaatu…. Sirbi Hacee sagaleen gadi qabamee sirbaa jira…. Itti fufeetu, ani akkuman sitti hime; magaalaa kanattin dhaladhe. Sirboota; Ammayyaa; afaan faranjiin ; reegeefi kkf kaaseti isaa bitee galeen manatti dhaggeeffadha. Guyyaa tokko abbaankoo; Utuun sirboota ammayyaa kana dhaggeeffachaa jiruu, sirboota dhagahuufuu nama rakkisu kana manatti guuruu dhiiftee maal qaba yoo Kaaseta Alii Birraa,Ilfinesh Qannoo, Abbitew Kebede fiddee dhuftee ofis dhaggeeffattee nus dhaggeeffachiifte naan jedhe… Warrooti amma ati jettu kun; sirboota afaan Oromooti mitii ? Eeyyee jedhee naaf deebise Abbaankoo… Teeppii kana haa caccabsu jetteetimooree jedheen isaaf deebisee. Yeroo sanatti Sababan dubbadheefin qaba. Sababni isaas isa bakkeerraan jedhanin dhagahe. Isan amanee fudhe. Isatu dhugaa natti fakkate… Gaafan mana hidhaatii bahu abbaan kiyya boqotee ture. Kaaseta sirbaa afaan oromoo biteen dhaggeeffachuu jalqabe. Harmeen kiyya guyyaa tokko akkas naan jette” Afaan Oromoo dubbachuufi Dhaggeeffachuukee maal qaba abbaankee aluma tokkoof utuu argee du’eera ta’ee naan jette… Maqa Oneeg jedhu natti moggaasanii waggaa torban mana hidhaa ture. Yeroo sana mana hidhaa sana seenuun;na haa aarsuyyuu malee. Keessa turaa gaafan deemu gammachuun natti dhagaayamaa dhufe . Barreeffamoota gaggabaaboof kitaabawwan seenaa baayyeen dubbisuu eegale. Eenyummaakoon baruu jalqabe. Ijoollota Oromoo Maqaa Oonegiin hidhaman faana wal barre. Gaafan mana hidhaa seenu afaan oromoo hin danda’un ture. Amma garuu ana caalaa namni danda’a jedhee hin yaadu… Eenyuumaankee gaafa tuqamu si dhukkubsa. Dhukkubbii hunda caalaa sitti dhagaayama. Eenyummaakee hin beektu taanaan garuu Yoo si waraananis eessa akka si waraanaan; hin beektu. Garuu dhiiga coccobsaa deemta. Akkuman sila siin jedhe, utuun mana hidhaa hin seenin dura Namni yoo waan barbaade jedhee na arrabse dhimma kiyya hin turre. Garuu akkan mana hidhaatii baheen, torban tokko utuun turin jijjiiraman ofirratti arge.. Guyyaaan isaa Ayyaana sooma Hiikaatu akka borii qabamuuf jedha. Haadhi warraa kiyya ulfa turte. Foon bituufan gara lafa foon itti gurguramu deeme. Namichi foon gurguru sun dhalataa kibbaati. Namni dhaaba toleessi uffannaan irraa bareedu tokko duuba kiyya dhaabatee; isa foon muruun “Walaamoo” foon gaariin jiraa jedhee gaafate…. Duuba mil’adhee takka ilaaleen, akkas hin jedhamun jedheen. Argitee, kan arrabsame ana miti. Ani walaamoo utuu hin taane Oromoodha. Eenyummaakee gaafa bartu eenyummaa nama biraaf kabaja qabaatta… Namicha sanaan arrabsoo eenyummaa namaa tuquun, xiqqeessuuf yaaluun gaarii akka hin taanen itti hime. Anaanaan gorsuu barbaaddamoo jedhee na ifate… Ana mitii; daa’imni iyyuu gorsitee nama sirreessuu dandeessi, dogoggora dubbachaa jirta. Ammas taanaan alaan guutuu fakkaattee deemaa jirta malee keessikee duwwaadhan jedheen.. Aariidhaan… Ati eenyuudha ; eenyuun arrabsaa jirtan natti iyye… Akkan isa hin arrabsine; dogoggora isaa qofa akkan itti hime irra deddeebi’een hubachiise… Dhumarra; Walaamoofi Gaallaa akka hin jedhamne; eenyutu seera baase jedhee dubbate… Gaallaa jecha jettu gaafan dhaga’u nan dafqe. Dubbii tokko malee booksiidhaan dhaheen lafa diriirse… Baayyee reebeen jiraafi du’aa isaa utuu hin beekinan sokke…. Ani harkakoo mirgaan maddiikoo utubee haasaa isaa miiraan dhaggeeffachuutti ergan eegalee lafan jiruu shak hin jenne…akka nama hirriba keessaa dammaquuttan ol jedhee gaaffii tokko gaafadhe…
Of Eeggannoo godhaa…- Guyyaan isaa guyyaa ayyaanaati. Taabotni Kaleessa bahe har’a waan galuuf daandiiwwan magaalaa Finfinnee keessa jiran baayyeen isaanii cufaadha. Taaksonni heddunis tajaajila kennaa hin jiran. Ariifadhee gara manaa galuu waanin qabuuf Raayidii qabachuufan dirqamee, gara dhaabbata raayidiitti bilbiladhus konkolaachisaa naaf erguu hin dandeenye. Konkolaattota hojii akkasii hojjetan, kan naannoo sana dhaabachaa jiran gaafachuuttin ka’e. Baayyeen isaanii karaan cuccufaa waan ta’eef akka deemuu hin barbaadne natti himan… … Konkolaataan walakkaan qaama isaa halluu bunaafi walakkaan ammoo bifa keelloo qabu; bakka dhaabbachaa jiruu ka’ee deemuuf jedhuun argeen gaafachuuf itti deeme… Gullalleen jira. Afaan amaariffaatin, kara foddaa harka isaa mirgaan saaqamee jiruun, gara #Sabbataatti na fudhachuu dandeessaa?…..jedheen gaafadhe… Tiraafikiin fuuldura isaa dhaabbachaa waan jiruuf, Eeyyee, ariifadhuu seeni jechuun balbala naaf bane. Anis konkolaataa argachuu kiyyatti gammadeen seenee, imala keenya eegalle. Garuu, ariifadhuu seeni naan jechuu isaafi Kiilo Meetira irraa jalqabne waan natti hin himneef baayyisee akkan isa shakku godhe. Akka inni KM irraa eegalle anatti agarsiisuufan dirqisiise gaafadhe. Innis erga natti agarsiisee ………. “ Qabeenyi kun kan namaa miti, kanuma kiyya, kanaafuu waan rabbi naaf kennun nyaadha malee hin hatu” naan jedhe….. Bifti isaa baayyee diimaadha. Dudduuba isaan taa’ee jira. Of fuulduratti gaafan isa ilaalu Boquun isaa furdatee addaan ciccitee jiru, sadarkaa ittiin gamootti olbaahan fakkaata. Maddiin fuula isaa furdaa; garaan isaa borcii guddaadha ykn xiqqaadha hin jedhamne kan qabu, ga’eessa umuriin isaa tilmaamaan ganna 50 keessa jiruudha. Garuu ammayyuu akka dargaggeessaati. Akkuma xiqqoo imalleen, Sirba Weellisaa beekamaafi jaallatamaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa bane. Yeroo dhageeffatu; waan namni achi keessa hin jirre itti fakkaata, sagalee sirbichaas suuta suuta utuu itti dabaluu dhumarraan gaheera. Fedhii; nama isa waliin jiruu utuu hin beekin sirba barbaade banee; isayyuu sagalee isaa hamma gurra duuchuu danda’uun gahuun isaa na raaje. Ta’us afaan Oromooti. Sirboota madaa Oromoo tuttaqaniyyuu bakka deemnu hundatti fedhii keenya malee dhaggeeffanna…Kunimmoo….Afaan Oromooti , isumaayyuu Haacaaluudha…..jedheen ofikootti dubbadhe… Namni kun Sirba afaan Oromoo kan inni dhaggeeffachaa jiru sababa lamaan ta’uu dandaa’a jedheen yaade. 1. Filaashii irraa sirboota baayyee waliin fee’atee…. 2. Ykn immoo Raadiyoon affeereeti jedheen tilmaame. Sababni ani kana yaadeef immoo;uffaannan inni uffatee jru alaabaa minilik sana ofirraa haa dhabu malee; kuula uffanaa habashaa fakkaatu waan ofirraa qabuuf habashaadha jedheen yaade. Utuu xiqqoo hin turin sirbi Hacee;#LaalGalootoon xumuramee, sirba itti aanutti darbuuf jedha…. Sirba itti aanee dhufu baruuf, Sekoondiiwwan darbiinsa kana gidduu jiran waggaa tokko ta’ee natti mul’ate. Waanin baayyee hin eegnetu ta’e… ammas sirbi itti fufe sirbuma Haceeti. Hin seene …. anatti hin fakkaane..kan jedhu. Fuullee fuldurakoo jiru keessattin isa hordofaa jira. Ijisaa imimaan calalee duumessa roobuuf jedhu fakkaateera. Harka isaa mirgaatiin marii konkolaataa dhaha…. Aarii wayii qaba malee; miira sirba kanaatiif akka hin taanettin yaade… - Hinseenee edaa hin hubaannee Hinseeneenee anaatti hin fakkaannee… Hinseenee…anaatti hin fakkaanne … Mudannoo tasaamoo? Arjooma rabbiitii! Maalumaaf gadadoon Anaati marmaartii? .. Weelluun Hacee dhumuuf bo’oo dhumaa qabateera. Yeedaloofi sagaleen kilolee isaa qalbiikoo fudhatee anis hamman eessa jiraachuukoo dagadhuttin gahe… Kaayyoo gahumsakoo Hin dhiisne hin dagannee Hawwii… Hawwiii… Hawwiii… Ani hawwiikoo …malee.. Ani homaa hin beeknee… Karaatti si qurxan malee… jedhee walakkaa marii rukutee sagaleen xurumbaa guddaan dhagaahamuu isaatu yaadakoo keessaa na dammaqse… Akkuman yaadakoo keessaa weeraree ka’een Afaan Oromoo ni dhageessamoo….Anatu gaafate. Sirriitti malee… jedhee naaf deebise. Baayyee gaariidha …. Ofittin gungume …Oromoo ta’uu isaatti qummaadaa.
Christianity is Life...... 14 Jan, 10:48
Hacaaluun Amanamaadha, kana kan hin beekne gantuudha. . Dubbisaa dhugaa kana. . Jaalala #HACAALUU fi #OBBO_DARRIBEE Kaleessa Suuraa Obbo Darribee ilmaan Haceef kennaa Aksiyoonaa kennan argee hedduu natti dhagahame. Seenichi akkasi💤 dubbisaa➡ Tilmaamaan waggaa 4 dura anaa fi Obbo Darribeen hojii baankii daawwachuuf gara Jimmaa, Iluuabaaboraa fi Walaggatti guyyoota 10f imalle. Yeroon sun hedduu dadhabsiisaa fi guyyaatti damee 3-5 daawwannee galgala deemaa bullee magaalaa biraa qubanna ture. Halkan karaarra yeroo deemnu walleewwan adda addaa dhageefachaa deemna, albamii Hacaaluu 2ffaan biyya alaati waan gurgurameef namni hedduun walleewwan isaa yeroo sana hin dhageenye anis albaamii guutuu Mobile📱 kiyyarraa wannan qabuuf Obbo Darribee waliin dhageefachaa deemna turre. Isaanis hedduu jaallatan, Hacaaluu duraanuu hedduu dinqisiifatu yeroos ammoo caalaatti jaallatan. Ji'a tokko booddee Haceen naa bilbilee Konsartii Muuziqaa guddaa tokko Finfinnee Hoteela #Gihoonitti hojjechuun barbaada baankiin keessan Ispoonsara akka na taasisuuf Obbo Darribee wal na barsiisii nan jedhe. Anis deebisee Obbo Darribee hedduu si jaallatuu beellama siifan qaba koottu haasofsiisi jedhen deebiseef. Guyyaan isaa Sambata duraa sa'aatii booddee ture Hacaaluu fi hiriyaa isa waliin hojjetan fuudhen Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa waajjira muummee Obbo Darribee bira seenne. Obbo Darribeen yeroo Hacee argan nan yaadadha itti marmanii dubbisuun, jaalalaan ol fuudhanii dhungatan. Haceenis hedduu gammade dhimma Konsartii mariisise. Yeroo sana yeroo qabsoon Oromoo jalqabee jabaachaa jiru ture Finfinneetti Oromoon akka walitti qabamu mootummaan hin barbaadu ture, haa tahu malee Haceenis Obbo Darribeenis sodaa tokko malee baankiin sponsaara miliyoona 3 taasisee baasii hundaa danda'e akka hojjetu waliif galle👌 Akkataa walii galteen qarshiin dursaa Miliyoona 1.5 Account Haceeti galee hojii eegalle, dhimmi konsartii heyyama argachuu hin dandeenye ni dhorkame. Haceenis qarshii Mil.1.5 hundaa fidee galatoomaa jedhe baankiiti deebise. Obbo Darribeenis hedduu ajaa'ibsiifachuun yeroo biraa akka gargaaruu danda'anii fi gargaarsa biroo illee yoo barbaade akka cinaa dhaabbatan itti himuun gargar bahan. As irratti wanti hedduu nama ajaa'ibu amanamummaa Hacee fi jaalala inni qarshiif qabu homaa akka hin taane nama dhugaa tahuu isaan hubadhe. Waggaa sadii dura Haceen ka'een daldala sichi hojii aartii qofaan jiraachuu hin dandeenye jedhe, ammas Obbo Darribeen duraan hedduu isa jaallatan gootummaa isaa galma Barkumee fi aantummaa saba isaa ilaalanii liqiin qarshii Miliyoona 10 fudhatee hojii akka eegalu taasisan (Akkuma inni OMN irratti dubbate). Hojii sanas jabaatee hojjechuun qarshii fudhate hundumaa otoo lubbuun isaa hin darbiin torbaan lama dura liqii baankii hundaa ofirraa cufe. Silaa maal godhu marsaa itti aanu waan hedduu hojjechuuf nan mari'achaa ture gidduuti nyaatame haadhoonkoo😭 Maarree hojjetootni baankichaa Jaalala Haceef qabaniin, jaalala addaa Pireesidantiin baankichaa isaaf qaban irraa ka'uun qarshii Mil 1.5 tahu sassabuun ijoollee isaatiif maqaa tokkon tokkon isaanitiin aksiyoonni baankichaa bitamee kennameef, kana jechuun hanguma baankichi guddachaa deeme yeroo guddatan miliyoonota hedduu argachuu danda'u. Kaleessa Obbo Darribeen imimmaan harcaasaa ijoollee isaa gargaaruu yeroon argu jaalala isaan waliif qaban sinitti himuuf dirqame😢 Sinittin dheeresse fakkaata Nagaan Oolaa Guyyaa Gaarii Gammadaa Olaanaa Finfinnee
Christianity is Life...... 29 Dec 2021, 07:00
በእንቅስቃሴው ብቻ አለምን ሲያስገርም ሲያስቅ የነበረው ተዋናይ #Mr_been በElectrical Engineering የPHD ባለቤት ነው
Qophummaan kan sitti dhagaa'amuuf namni waan si waliin hin jirreef osoo hin taane situ ofiikee waliin hin jiruufi.
Ofitti amanamummaan waadaa mataa ofiitif seenan guutuu irraa dhufa.
Sammuun gaggeessaa qaama maraati. Burqaa yaa'insa yaadaa kan ilaalcha eenyummaakee qajeelchu, dandeettin yaaduu, karoorsuu, xiinxaluu, murtee dhiheessuufi furmaata qopheessuuf Uumaan dhala namaa badhaasedha. Qaama xiqqoo jijjiirraa hin qabne fayyummaakee lallabuuf raagaa qabatamaa si ibsutu sammuukeeti. Sammuukee eeggadhu!!!! @uniqueforworld @sewhunsw
#መንገድህን_ጀምር #መስራትህን_ጀምር “እኔ መምህር ነኝ፤ እናም አንተም በእኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ትማራለህ። የእኔም አላማ አንተን ወደ ተፎካካሪ፣ ማቆሚያ አልባ፣ ከተለዋዋጭ ጠባይ ነጻ የሆነ፣ የማይገደብ፣ የማያፍር፣ የማይፈራ፣ ስኬታማ እና ደስተኛ፣ አምላኩን በትንሹም በትልቁም ጉዳይ ውስጥ የሚፈልግ ማድረግ ነው - ያንተም አላማ መሆን ያለበት እነዚህን ሁሉ መማር እና መተግበር ይሆናል። ለምን ታድያ የጀመርካቸውን ስራዎች አትጨርስም? ትክክለኛ አላማ እና ዝግጅት ካለህ የማትጨርስበት ምክንያት ይኖር ይሆን? ምን ቀረ? … ይህን ስራ ማድረግ እንችላለን… ሆኖም በእኛ ኃይል ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር አለ… ያለፈውን ጊዜ መተው፣ ያለፈውን ጊዜ መርሳት ይኖርብናል። አሁን ላይ መጀመር ብቻ ነው ያለብን። እመነኝ ውጤቱንም ታየዋለህ" #ኤፒክተተስ ታስታውሳለህ፤ በልጅነትህ ወደ ትምህርት ቤት ስትጓዝ… መምህሩ የጠየቀውን ጥያቄ እጅህን አውጥተህ ለመመለስ ትፈራ ነበር፤ ምናልባትም ብሳሳትስ የሚል ሃሳብ ይመጣብሃል። አብዛኞቹ ወጣቶችም ራሳቸውን ከመግለጥ ይልቅ እንዲሁ በፍርሃት ውስጥ ይደበቃሉ። ነገሮችን በግማሽ ልባቸው ይከውናሉና ለውድቀታቸው ምክንያት አያጡም፡ “ችግር የለውም በቃ፤ በስርዓቱ እንኳ እየሞከርኩ አልነበረም” እድሜያችን በጨመረ ቁጥር እነዚህ ቀላል መውደቆች የማያስፈሩን ይሆናሉ፤ አሁን ላይም የትምህርት ውጤት ወይም የሩጫ ውድድር ማሸነፍ ያንተ ዋና አላማ አይደለም፤ ከዚህ ይልቅ የተመቻቸን ኑሮ መኖርህን ቅድሚያ ትሰጠዋለህ። እናም ይህም የሚያስፈራህ አይሁን። ነአለም ጠቢብ የሆነ መምህር ካንተ ጋር አለ። አንተ ሁሉንም ከመቻልህም በላይ መምህርህ እንዲህ እንድታደርግ ይጠይቅሃል፡- መንገድህን ጀምር… መስራትህን ጀምር … የተቀረው ሁሉም ይከተልሃል። #የለት_ፍልስፍና መጽሐፍ
Christianity is Life...... 19 Dec 2021, 04:05
Christianity is Life...... 18 Dec 2021, 21:24
Christianity is Life...... 10 Dec 2021, 18:44
DUBBISTOOTAF Mee Seenaa Ajaa’ibaa Kana Dubbisaa Seenaa kana dubbistee yoo garaan kee sin roraane ati garjabeessa! Barataa tokkotu ture. Abbaaf haadha waan hin qabneef nama isa gargaaru dhabee ofumaa barataas ofi gargaara ture. Yeroon isaa ganna waan tureef hanga manni baruumsaa banamuuf waan tokko tokko daldalee qarshii walitti funaannatee baruumsatti deebi
uuf yaade. Guyyaa tokko akka tasaa ta
ee gaazexaa gurguruuf qabatee magaalaa keessa deemuu eegale. Haata
uu malee guyyaa sana gaazexicha namni isarraa bitu hin turre. Guyyaa guutuu naannawaa oolee garmalee beelawe. Fala barbaadee waan godhu yeroo dhabu mana namaatti goree du
uu irra nyaata kadhachuuf murteesse. Mana nama tokkootti yeroo deemee balbala rukutu intalli takka dhuftee balbala jalaa bantee maali barbaadde obboleessoo ittiin jette. Innis waan akkasii gaafachuun jalqaba waan itti ta
eef nyaata naaf kennaa jechuu dhiisee mee bishaan bishaan dhugaatii naaf kennitaa ittiin jedhe. Isheen takka dhaabbattee fuula isaa ilaalte. Maatiin ishees hedduu nama qabeenya qabu hin turre. Gara manaatti oli deebitee nyaata mana keessaa dhabde. Haata
uu malee, bishaan inni gaafate osoo hin ta
in Aannan qabdee dhufteef. Inni rifatee ani bishaan jedhe maaliif aannaniif dirqamte? jedhee, meeqa siif haa kafalu jedhee gaafate? Isheen lakki waan tokkoyyuu hin kafaltu maatiin keenya rakkannuyyuu waan qabnuun nama akka keenya rakkataa gargaaruu gaafa daa
imummaa irraa jalqabee na barsiiseera ittiin jette.Innis tole galatoomi jedhee hedduu galateeffatee biraa deeme. Erga turaanii bara 10 lakkaawanii booda mucichi baratee doktora ta`eera. Gaafa tokko isaa guyyaa hojii irraa boqonnaa irra jiruu hospitaala inni keessatti hojjatuu bilbilli bilbilameef. Ergaan bilbilaa akkas jedha ture maaloo maaloo ammaa kanaaf ogeessi baqaqsee hodhuu danda’u nu bira hin jiru waan ta’eef adaraa lubbuu namaa baraari ittiin jedhan. Kana booda innis garmalee ariifachaa gara hospitaalichaa deemee, oli galee dafee uffattee gara kutaa surgery seene. Yeroo seenu waan addaa tokko arge. Intalti gaafa sana aannan kenniteef dha kan du’aaf jireenya jidduu turte. Ishee baqaqsee hodhee turtii guyyaa muraasa booda ofi barte. Eessa akka jirtu yaaduu jalqabde. Gaafa ofi ilaaltu baqaqxee hodhamuu agarte. Doktorichi dhufee gaafachuu eegale. Isheen isa tasuma hin yaadatne. Garuu doktor waan si gaafadhu qaba jetteen imimmaan dhangalaasaa. Maal maaltaate jedhee gaafate. Ani maatii hiyyeessa irraa dhaladhe, abbaan koo dhiyeenya kana adunyaarraa boqate.Anaa miti maatiin koo takkaa hospitaala guddaa akkanaa seennee yaalamee hin beeku. yoo dhibamnes mana yaalaaf mana qorichaa xixinnoo irraa dawaa bitanna malee. Amma harmee koottu mana abbaa qabeenyaa qulqulleessaa nu guddisaa jira. Kanaafuu baasii kana akka suuta jedhee kafalu naaf eeyyami ittiin jette. Innis dhageffatee mee maalumaafuu xalayaa mana baajataa irraa siif haa ergamuu deemii gali jedheen. Guyyaa muraasa booda Xalayichi ergameefii banuu sodaatte. Qarshii ani jireenya koo keessatti kafaluu hin dandeenye ta’uu Mala jettee yaadde haa sodaattu malee xalayicha banuuf dirqamte. Yeroo bantu xalayichi akkas jedha. Hunda dura fayyitee sadarkaa kana gahuuf rabbiif galata. Nuti hunduu eessaa kaanee eessa akka geenyu hin beeknu. Yaala keetiif gatii bahe tilmaamneerra. Sitti himuuf ni ulfaata. Haata’uu malee, ni yaadatta yoo ta’e guyyaa tokko barataan gaazexaa gurguru tokko dhufee bishaan si gaafatnaan, aannan kenniteef. Ati na dagattus ani akkuma argeen si bare. Ani mucaa gaafa sanaati. Anumaa sanatu doktora har’a rabbiin wajjiin siyaale ta’e. Takkaa akka guyyaa sanaa beelawee, dheebodhees hin beeku. Osoo ati aannan sana naaf hin keennin haftee ani du’uus ni danda’a ture. Atis waan qabduun du’arraa na baraarteetta, anis waan qabuun du’arraa si baraaruuf yaaleera. Qarshiin kee guutuun aannan burcuqqoo tokkoo ati gaafa sana naaf kenniteen bakka bu’eera. Hunda isaa sirraa kafaleera , womaa hin yaadin, rabbi si haa fayyisu ittiin jedhe. Isheen gaddaaf gammachuun itti Wal makee imimmaan dhangalaaste.
Horaa dagaagaa Yoo jaalattan ” Like “, Share, comment gochuu hin dagatinaa Seenaa birootiin walitti deebina. Maddi: jiruuf jireenya
Christianity is Life...... 30 Sep 2021, 10:57
💗❤💗❤#Yoo_Ani_Du’e...❤💗❤💗 ❇Guyyaa tokko namicha tokkotu daw’iidhaaf gara Amerikaa deeme jedhama. Biyyicha keessa olii fi gad deemee erga daw’atee booda dhuma irratti siidaa awwaala namootaa daw’achuuf warra isa daw’achiisan waliin mooraa awwaalaa tokko keessa seene. Mooraan sun baay’ee bareeda. Siidaawwan halluu miidhagaan kuulaman hedduutu keessa jiru. Barreeffamoonni siidaawwan sana irratti barreeffamanii turan garuu namichatti bitaa galan. Wantota dubbise amanuu hin dandeenye. Kanneen armaan gadii barreeffamoota sana keessaa fudhataman: ✔“Piroofeeser Joon Henerii, dhalatanii waggaa tokkoo fi ji’a ja’atti du’an.” ✔“Dokter Deev Waaysong, dhalatanii waggaa afuritti du’an.” ✔“Kaappiteen Ruut Toomaas, dhalatanii ji’a saddeetitti du’aan addunyaa kanattii addaan ba’an.” ❇Barreeffamoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu erga dubbisee booda ajaa’ibsiifachaa gara daw’achiisaa isaa deemuun gaaffii gaafate. “Ani kanan jedhu! Biyya kanatti namoonni gadameessa harmee isaanii keessatti baratanii eebbifamanii ba’umoo? Akkamitti namni waggaa tokkoo fi ji’a ja’atti piroofeesara ta’aa? Waggaa afuritti doktera ta’aa?” Yeroo kana daw’achiisichi, “Maal sitti fakkaatee? Biyyi kun akka biyya keessanii miti. Biyya keessanitti umriin nama tokkoo lakkaa’amuu kan eegalu guyyaa namichi gadameessa harmee isaa keessaa ba’e irraa eegaleeti. Asitti garuu akkana miti. Nuti lakkoofsa umrii kan eegallu guyyaa itti namichi seenaa qabatamaa tokko biyya isaatiif hojjete irraati. Aboo nuti gadameessatti hin amannu!” jedhee deebiseef. Yeroo kana namichi na’ee akkana jechuun gaaffii biraa gaafate, “Amma utuu ani biyya kanatti du’ee maal jettanii siidaa awwaala koo irratti naaf barreessituree?” Daw’achiisaanis, “Seenaa ittiin yaadatamtu kan dhaloota dhufuuf darbu hojjettee qabdaa?” jedhee gaaffii isaa gaaffiin deebiseef. Daw’atichi xiqqoo erga itti yaadee booda, “Dhugaa dubbachuudhaaf hamma ammaatti hin qabu!” jedhee deebiseef. “Yoos” jedhe daw’achiisaan; “Yoos siif siidaan hin barbaachisu. Yoo akka tasaa siif ijaarame immoo ‘Obbo eenyu eenyuu, akkuma dhalataniin du’an!’ jedhamee siif barreeffama!” jedheen. 👉Argitee, seenaa ati waa irraa barachuu dandeessu kana kanan kaaseef akkanumaan miti. Dhimma namichaatu kan koo kana waliin wal fakkaate. “Dhugaa dubbachuudhaaf hamma ammaatti homaa hin qabu!” Kun anaafis dhugaa dha. Siif garuu hin beeku. Kanas ta’u sana amma murtoo tokko irra ga’een jira. Seenaan ittiin yaadatamu tokko hojjedhee dirqama eenyummaa koo ba’achuu. Akkamitti? Mataa koo kan gurra koo lamaan gidduu jiru sirriitti hojjechiisuudhaan. #Kitaaba_Miiltoo_Eebbisaa_Baayisaa_Namicha_Biyya_Oromoo_Dubbisaa! #Ergaankoo_Kunooti ❇Dhugaan namni kamuu beekuu qabnu siidaan seenaa kan namoota hojii seenaa gaarii hojjetani qofa ta'uu isaa ti. Tarii maal namoonni hojii hammeenyaa hojjetanii fi dhala namaa miidhan siidaa qabu mitii jetta ta'a. Kan isaaniif dhaabate siidaa seenaa osoo hin taane tuullaa dhagaati. Sababni isaa, Adunyaa kana irraa tuullaa dhagaa baayyeen dhalootaan diigamaa jira. Siidaan seenaa namoota hojii gaarii qabani garuu dhalootaan eegamaa jira. Ijaaramaa jiras. Utuu dubbannu Waaqayyo gaafa gara dachee kanaa nu fide waan haaraa nuti isheedhaaf hojjechuu qabnu wajjin akka nu fide meeqan keenyatu yaadata . Dhugaan sitti hima adunyaan kun anaanis; isa ana keessa jirus qabeenya guddaa tokko qabdi. Atis akkasuma qabeenya gati-jabbeessa eegatamaa jiru/jirtuudha. Amma bakkaa fi haala sitti hin tolle kam keessa jiraachuu malta. Dhugaan ani sitti himu garuu lafa kana irratti hojii hiika qabu hojjechuu dandeessa. Karoora Waaqayyootti karoorsi; Kaayyoo Waaqayyo siif qabutti kaayyeessi. Waan gochuu dandeessu hundumaa dhibbaa'ummaa malee godhi. Yeroo hundumaa abdii kutachuu akka hin qabne irra deddeebi'i ofii keetti himi. Seenaa hojjettee siidaa seenaa qabaachuu akka dandeessus amani. Ati tasumaa qofaakee miti. Abbaa kaayyoo keetii isa sii wajjin jiruu wajjin immoo waan gaarii ta'e hundumaa gochuu ni dandeessa. Galgala TV IFA FAYYINAA irratti sa'a 2:00 n wal argina. Namoota jaallattu hundumaa maaddii kanatti afeeruuf #share godhi is
Christianity is Life...... 23 Sep 2021, 18:42
📖 የእግዚአብሔር ቃል ✍ በሰይጣን ላይ ከፍተኛ #ሽብር ለመፍጠርና ትጥቅ ለማስፈታት የሚያስችለን ኃይል #የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንዲሁም የእግዚአብሔር ቃል ሰይጣንን #አፉን ዘግቶ ጥሎ #እንዲሽሽ ከማድረጉም ሌላ #የገሃነምን ደጆች ለመዝጋት ዓይነተኛ #ኃይል ነው። ✍ ሰይጣን የመገለጥ መልእክቶች ስላሉት እርሱ የሚናገረውን ማፍረስ ያለብን በተሰጠን #ቃል ነው። ለምሳል፡ ⚜ ሰይጣን: ትሞታለህ 📖 የእግዚአብሔር ቃል: "አልሞትም በሕይወት እኖራለሁ እንጂ" (መዝ 118፥17 ⚜ ሰይጣን: እግዚአብሔር ትቶሻል አይወድሽም 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ" ( ኤር 31፥3 ⚜ ሰይጣን፡ ተከብበሃል መጥፍትህ ነው 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "በአንድ መንገድ ይመጡብኛል በሰባት መንገድ ይሸሻሉ" ( መዝ 91፡7 ⚜ ሰይጣን፡ ዓለምን በሙሉ ተቆጣጥርናል 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "በዓለም ካለው ይልቅ በእኔ ያለው ታላቅ ነው" ( 1ዮሐ 4፥4 ⚜ ሰይጣን፡ ትደኸያለህ 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "ጎለመስሁ አረጀሁም፣ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም" ( መዝ 37፥25 ⚜ ሰይጣን፡ አደጋ ይደርስብሃል 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "የሚጠብቀኝ አይተኛም" ( መዝ 121፥3 ⚜ ሰይጣን፡ ኃጥአትህ ብዙ ነው ይቅርታ አታገኝም 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "የልጁም የእየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነፃኛል" ( 1ዮሐ 1፡7 ⚜ ሰይጣን፡ በሽተኛ ሆነህ ትቀራለህ 📖 የእግዚአብሔር ቃል፡ "እኔ ጤናህን እመልስልሃልሁ" ኤር 30፥17 ✍ ሰይጣን አማኝን ተስፍ ለማስቆርጥ የሚላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሰይጣን የሚለውን ማፍረስ የሚቸላው #በቃሉ ሥልጣን ነው። #በእግዝአብሔር ቃል ሰይጣንን ተስፍ ማስቆረጥ በጣም #ቀላል ነው። 🙏 ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ቶሎ ና። ✅ ሼር አድርጉ ☑️ 👇👇👇👇👇👇👇 @GreatCommand @GreatCommand @GreatCommand
Christianity is Life...... 23 Sep 2021, 07:03
ዘማሪት ዘመናይ ጎሳዬ በቃለ አዋዲ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ። ከዘመረችው ዝማሬ። ዋና መዝሙር የዘማሪት ፍቅርተ ፈለቀ ቁጥር ሁለት ጥያቄ የለኝም ከተሰኘው አልበም። ሌሎች ዝማሬዎችን ፅሁፍ መልዕክቶችን ለማግኘት ከስር ባለው ቴሌግራም ቻናል ሊንክ JOIN ያድርጉ። https://t.me/HawazTegegn
ZEMENAY GOSAYE LIVE WORSHIPING ON KALE AWADI PROGRAM.mp3
🎼ታስፈልገኛለህ መንፈስ ቅዱስ ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ "ይቅርታ" vol 3 አልበም 📀ሙሉውን ለማድመጥ ከስር ባለው ሊንክ Join ያድርጉ። https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn
Menfes kidus መንፈስ ቅዱስ hawaz vol 3.mp3
🎤"ነፍሴ የወደደችህ" ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ vol 3 ሙሉ አልበሙን ለማድመጥ ከስር ባለው ሊንክ Join ያድርጉ። https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn
Nefse yewededechih ነፍሴ የወደደችህ hawaz vol 3.mp3
track 7 "በሰላም ሂድ ያለኝ" ከዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ "ይቅርታ" አልበም ሙሉ ዝማሬውን ለማድመጥ ከስር ያለውን ሊንክ ይጫኑ join ያድርጉ። https://t.me/HawazTegegn
Beselam hid በሰላም ሂድ ያለኝ hawaz vol 3.mp3
ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ ከቃለ ዐዋዲ መድረክ ወርሃዊ ዐቢይ ጉባኤ አገልግሎት ላይ Live Record የተወሰደ ዝማሬ። አይሆንልኝም ጌታ ያላንተ :- * ዋና መዝሙር ዘማሪ ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ ይቅርታ ከተሰኘው ቁጥር 3 የ ዝማሬ አልበም ላይ* "ኢየሱስ ልዩ ነህ :- ዋና መዝሙር ዘማሪ ዲያቆን ዘለአለም ይንገስ "የዘለአለም ሕይወቴ " ከተሰኘው ቁጥር 1 የዝማሬ አልበም ላይ። Live recording and mixing ሐዋዝ ተገኝ። JOIN US ON 👉👉👉👉👇 https://t.me/HawazTegegn
HAWAZ NEW LIVE(2).mp3
ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝ vol 3 "እንዴት" ሙሉ አልበሙን ለማድመጥ ከስር ባለውን ሊንክ Join ያድርጉ።https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn https://t.me/HawazTegegn
Endet እንዴት hawaz vol 3.mp3
Christianity is Life...... 22 Sep 2021, 04:21
በህይወት ሩጫ ውስጥ የሚያሸንፈው ቀድሞ የደረሰ ብቻ አይደለም ውድድሩን የጨረሰም ነው። የግድ በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ቀድመን ወይም እኩል መድረስ አለብኝ ብለን ራሳችንን ማስጨነቅ የለብንም። ራሳችንን ካወዳደርን አይቀር ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከትላንቱ ማንነታችን ጋር መሆን አለበት። ስኬት የሚለካው በራስ መነፅር እንጂ ከሌሎች ጋር ባለን ንፅፅር አይደለም።
Christianity is Life...... 22 Sep 2021, 04:20
“Inni du'aa ka'e sun gara waaqaatti ol ba'ee, gara mirga Waaqayyoo jira; ergamoonni Waaqayyoo, warri aboo qabu jedhamanii sodaataman, humnoonnis harka isaa jala jiru.” — 1Phe. 3:22
Christianity is Life...... 20 Sep 2021, 21:24
🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹 "Xiyya gaafa darbatan akka inni fagoo deemuuf sirriitti duubatti harkisuun gadi dhiisu. Atis akkuma kanaa haalli keessa jirtu gaafa duubatti si harkisu fageessee fuulduratti si darbachuuf waan ta'eef jabaadhu Kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu!"
Christianity is Life...... 15 Sep 2021, 05:06
🎄🌲🌲🌲🌲🌲🌲🎄 Baga Bara Haaraa Nagaan Geessan!!! 🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼 Channel isin fayyadan baay'een HOPE PROMOTION dhaan akka armaan gadiitti isiniif dhihaataniiru: Maal barbaaddu? Channel barbaaddan irratti ammuma gadi tuquudhaan nutti dabalamaa! ❍️ Qophiilee Bashannansiisoo ❍️ Odeeffannoo Haaraa ❍️ Gorsaa fi Xinsammuu ❍ Haalduree Milkaa'inaa ❍️ Kitaabilee bifa PDF ❍ Beekumsa Waliigalaa ❍ Oro Comedy fi Fiilmii Dhugumatti itti bohaaraa irraa ni barattu. Hunduma Bakka tokkotti argachuuf join kan jedhutti bu'aa! 👇👇👇👇 JOIN ALL CHANNEL HERE! ███▓▒►JOIN ►▒▓███ ███▓▒►JOIN ►▒▓███ ███▓▒►JOIN ►▒▓███ ███▓▒►JOIN ►▒▓███ ███▓▒►JOIN ►▒▓███ ❏ Itti Gammadaa! bashannanaa! ❏ Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu! ❏ Gαℓαтσσмαα!!!
💻 Computer Solution 💻
Wangeela Afaan Oromoo
Gaaffilee Macaafa Qulqulluu
Ilma namaa ✝️
Luboota Kakuu Haaraa
Gospel for Generation
FSF Mezmur Tube
🌱 Daandii Guddinaa 🌱
🔔 HOPE PROMOTION 🔔